Saciid Deni oo xil ka qaadis ku sameeyay Taliyihii Ciidanka Booliska Puntland iyo Kuxigeenadiisa - Awdinle Online
Saciid Deni oo xil ka qaadis ku sameeyay Taliyihii Ciidanka Booliska Puntland iyo Kuxigeenadiisa
April 27, 2020 (Awdinle Online) –Madaxweynaha Puntland ayaa xil ka qaadis ku sameeyay Taliyihii ciidanka Booliska Puntland Jen. Muxiyadiin Axmed Muuse, kaddib digreeto maanta ka soo baxday xafiiska Madaxweynaha.
Digreetada ka soo baxday xafiiska Madaxweynaha Puntland ayaa waxaa xilka Taliyaha Booliska loogu magacaabay Jen. Cabdi Xasan Xuseen (Cabdi Yare)
Sidoo kale waxaa xilalka laga qaaday Taliye kuxigeenkii kowoaad ee Ciidanka Booliska Jen. Bile faarax Cali iyo Taliye kuxigeenka 3aad G/sare Axmed Maxamuud Cali (Jeenitaag), mana jirto cid lagu bedelay Taliye kuxigeenada xilalka laga qaaday.
Xil ka qaadistan ayaa lagu sheegay inay qeyb ka tahay si dib u habeyn loogu sameeyo Taliska Guud ee Ciidanka Booliska Puntland, isla markaana horay u jireen is bedelo lagu sameeyay talisyada ciidanka.
Previous articleMadasha Xisbiyada Oo War Cusub Kasoo Saartay Xaaladda Dalka
Next articleIsrael ‘oo sugeysa’ ogolaanshaha Mareykanka si ay uqaadato daanta Galbeed.